UVavi ugxeke inkohlakalo kuhulumeni
Durban - UZwelinzima Vavi uxwayise ngokweseka abantu ababhekene namacala enkohlakalo, lokhu kulandela ukuthi ezwe ngokuthi kungase kuboshwe izikhulu zikahulumeni eKZN, kubika isiteshi somsakazo i-East Coast Radio.
Uphiko oluphenya ngamacala omphakathi iNational Prosecuting Authority ikhiphe incwadi egunyaza ukuboshwa kukaNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho uMike Mabuyakhulu noSomlomo weSishayamthetho uPeggy Nkonyeni ngesonto eledlule.
Kuthiwa babhekene namacala enkohlakalo abandakanya ithenda likahulumeni lika-R45 million.
Yize uVavi engawafakanga amagama kaNkonyeni noMabuyakhulu enkulumweni yakhe, utshele amalungu eSadtu eThekwini ukuthi abantu abatholakala benamacala enkohlakalo akumele bahudulele igama le-ANC kulolo bishi.
Uthe kumele bazitholele abammeli babo.
"Angisophinde ngeseke muntu enkantolo obhekene namacala enkohlakalo nokukhwabanisa," esho.